Qarax Lagu Laayay Mas’uuliyiin Ka Tirsan Maamulka Farmaajo. – Calamada.com
Qarax Lagu Laayay Mas’uuliyiin Ka Tirsan Maamulka Farmaajo.
Qaraxan waxa uu ka dhacay deegaanka Weydow ee Muqdisho kaasi oo lala beegsaday gaari ay la socdeen Mas’uuliyiin ka tirsan maamlka Kooxda Ridada ugu magacaaban deegaanka Garasbaaley ee duleedka Muqdisho.
Dhawaaqa qarax ayaa si aad ah looga maqlay qeybo badan oo ka mid ah gudaha iyo duleedka magaalada Muqdisho,iyadoona faahfaahin dheeraad ah laga helayo khasaaraha Murtadiinta lagu gaarsiiyay qaraxaasi.
Inta la xaqiijiyay qaraxan waxaa lagu dilay Lix ka tirsan Mas’uuliyiinta maamulka Murtadiinta ee Garasbaaley,sidoo kale waxaa gabi ahaan burburay gaarigii ay la socdeen xubnahasi Murtadiinta ah ee qaraxa ku halaagsamay.
Mas’uuliyiintan ka tirsan Kooxda Ridada ayaa la socday gaari Runeed ah,iyadoona qaraxa lala beegsaday xilli ay marayeen deegaanka Weydow,waxaana burburka gaariga yaalaa goobtii qaraxa uu ka dhacay.
Qaraxan Ka dhacay magalada Muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli ciidamada Mujaahidiinta ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah Kooxda Ridada iyo kuwa Kufaarta ee ay ka fulinayaan gudaha magaalada Muqdisho.
Xigasho Radio Andalus.
Previous: Sarkaal Lagu Dilay Degmada Hilwaa Ee Muqdisho.
Next: Qarax Lagu Dilay Askar Itoobiyaan Ah.